အယ်ဖိုး: စက်ထဲက program တွေကို တစ်ခြားသူ သုံးမရအောင် password ဘယ်လိုပေးထားမလဲ
စက်ထဲက program တွေကို တစ်ခြားသူ သုံးမရအောင် password ဘယ်လိုပေးထားမလဲ
ကဲ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ မိမိ တင်ထားတဲ့ program တွေကို တစ်ခြားသူ မသုံးစေချင် ဘူးဆိုရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ လွယ်လွယ်လေးပါ ဒီကောင်လေး သုံးပြီးတော့ password ပေးပြီး သော့ခတ် ထားလိုက်ပါ password မမှန်သရွေ့ ပွင့်မှာမဟုတ်ဘူး စိတ်ချ။ လုပ်နည်းက လွယ်ပါတယ် .
start >> program ကို သွား မိမိတင်ထားတဲ့ program ကို ဥပမာ photoshop ဆိုရင် Photoshop shortcut လေးကို right click ပေးပြီး password protect ပေးလိုက်ပါ . password ပေးတဲ့နေရာမှာ နှစ်ခါ ရိုက်ထည့် ပေးရပါတယ် . အဲ့ဒီ့ နှစ်ခု တူပါစေ . မဟုတ်ရင် အဆင်မပြေပါဘူး .
အဲ့လို ရိုက်တဲ့အခါ error ပေါ်လာတတ်ပါတယ် . ဘာမှ စဉ်းစားမနေပါနဲ့ အဲ့လိုပေါ်လာတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ့ program က ဖွင့်ထားပြီးသား မို့လို့ . သူက သော့ခတ်မရတာ .
Task manager (ctrl+alt+delete) ကို ခေါ်လိုက်ပါ .
processes ကို ရွေးပြီး အထဲမှာ photoshop.exe ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးပွင့်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ . အဲ့လိုတွေ့တာနဲ့ သူ့ကို click တစ်ချက်နှပ်ပြီး end process ပေးလိုက်ပါ . အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ password ပေးလို့ရသွားပါပြီ .
ကဲ Download လုပ်ချင်သူများ အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ
Posted by Peace at 9:44 PM